ကယ်လီဖိုးနီးယား ငလျင်ကြီးလော… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » ကယ်လီဖိုးနီးယား ငလျင်ကြီးလော…
Posted by kai on Jun 28, 2011 in How To.., U.S. News | 12 comments
တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယား..အထူးသဖြင့် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်တ၀ိုက်ငလျင်ကြီးသတင်း တက်လာလို့ပါ..။
မလှုပ်သေးပါဘူး..။ လှုပ်နိုင်ကောင်းရဲ့ လို့.. ဆန်ဒီယေးဂိုတက္ကသိုလ်(UC San Diego)က ပညာရှင်တွေ ဆိုတာပါတဲ့..။
ဆော့လ်တန်စီးလ်အောက်မှာ ပြတ်ရွေ့ ကြော(ငလျင်ကြော)ရှိပြီး အဲဒါက.. အချိန်စေ့နေတာက.. လွန်တောင်နေပြီဖြစ်လို့ပါတဲ့..။
ကိုရိုရာဒိုမြစ်လျှံလာရင်.. အဲဒီကန်ထဲ ရေတွေစီးဝင်ရာကနေ.. သမိုင်းကြောင်းကောက်ပြီး သုတေသနလုပ်ဖေါ်ထုတ်လိုက်တာပါတဲ့..။
ဟိုးနှစ်သန်းချီက.. အဲဒီနေရာဒေသကြီးက… ပင်လယ်ပြင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့..။ ကိုရိုရာဒိုမြစ်က အနယ်တွေနဲ့..စုပေါင်းပြီး..မြေကြီးပြင်ဖြစ်လာတာပါတဲ့..။
မြစ်ကြောင်းဟာ.. နှစ်ရာချီကြာရင်..ပြောင်းလေ့ရှိပြီး… အဲဒါတွေကနေ.. ငလျင်ဖြစ်နိုင်ခြေ တွက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်..။
အဲဒါ…သတင်းအရ..လှုပ်တော့မယ်ပေါ့နော..။ လှုပ်မဲ့ပုံက.. ၁၉၀၆ ဆန်ဖရန်ငလျင်လို ဘေးတိုက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..တဲ့..
အသက်နဲ့..ဥစ္စာတွေကို ဥာဏ်စောင့်ပါတယ်..။ ဘယ်နတ်သကြားကမှ လာမစောင့်ပါဘူး..။
ငလျင်အတွက် ပြင်ဆင်စရာလေးတွေ ပြင်ထားကြဖို့ပါ..။
အဓိကက ငွေသားကို ဆောင်ထားပါ..၊
လက်နှိပ်ဓါတ်မီး၊ ရေ၊ မုန့်ခြောက် စသဖြင့်ဆောင်ထားပါ..။
Monday, Jun 27, 2011 | Updated 10:32 AM PDT
Man’s interference with Colorado River floods that used to regularly flow to the Salton Sea may have “stopped the clock” onaregular series of big earthquakes, setting the stage foramega quake that could wreck Southern California, scientists said Sunday.
The findings were published in the scientific journal “Nature Geoscience,” and were first reported by the San Diego Union-Tribune’s signonsandiego.com website.
The new Scripps study shows that several heretofore unknown fingers of the San Andreas system sit beneath the Salton Sea, and the sand and dirt of the Imperial Valley. The faults let loose with magnitude 7.0 quakes or larger every 180 years until the early 20th century — the same time the Colorado foods that had brought billions of pounds of water to the area were stanched.
သူကြီး တို့ ဆီများ နော် ။ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ရှိတာကို သတင်းပေးတာတွေ သတိပေးတာတွေ အပြည့်အစုံ နဲ့ ဆိုတော့ ဗျာ ရှိတဲ့ ပြည်နယ်သူ ပြည်နယ်သားတွေ တင်ကြို ပြင်ဆင် ကာကွယ်လို့ ရတာပေါ့နော် ။ ကောင်းပါပေ့ဗျာ ။
အားကျ ပါပေ့ ဗျာ ။
ကြောက်စရာပါလားနော် ။ အလွယ်တကူ စားလို့ရတဲ့ မုန့်တွေ ၊ အခြောက်အခြမ်းတွေ များများ ၀ယ်ပြီး စုဆောင်းထားသင့်တယ် နော် ။
သူ့လုပ်ငန်းမှာ ၀န်ထမ်းနှစ်ဆယ်လောက်ရှိတော့ ခေါက်ဆွဲခြောက် ၊ ငါးသေတ္တာ ၊ ဆန် စတာတွေကို ခပ်များများဝယ်ထားပြီး first in first out စံနစ်နဲ့ လှည့်သုံးတယ်။ အမြဲ လတ်နေတာပေါ့။ သုံးတဲ့ရေတောင် လှောင်ထားတယ်။ သူ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ တခြားသူတွေက ကွယ်ရာမှာ“ ကြောင်” တယ်လို့တောင် ပြောကြတယ်။
၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်တော့ ရန်ကုန်မြို့လည်မှာ ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့အခါ သူကတော့ အေးဆေးပဲ။ အလုပ်သမားတအုပ်လုံး ခေါ်ထားပြီး စားစရာ ၊ ရေ နဲ့ တခြား ဖယောင်းတိုင်လို ဓါတ်ခဲလိုပစ္စည်းတွေကအစ အားလုံးအလုံအလောက်ပဲ။
အဲဒီနေရာကျတော့ ဒို့ဗမာတွေကသာပြန်ရော၊အမြဲ အသင့်အနေအထားမှာရှိတယ်၊ သတင်းလေးတစ်ခုကြားတာနဲ့ ဆန်ပြေးဝယ်တတ်တယ်။
မီးမှန်နေလည်း ဖယောင်းတိုင်ဆောင်တတ်တယ်၊အ၀ီစိတွင်းရှိလည်း ရေကို ပေပါနဲ့သိမ်းထားပြီးမှ သုံးတယ်။
ငယ်ငယ်တုံးက ငလျှင်လှုပ် တယ် ဆိုတာ ဟိုဘက်ဒီဘက်ယမ်းတာ
လိုထင်ခဲ.တာ ဂျပန် နဲ. တာလေငလျှင် ကိုတွေ.လိုက်တော.မှ
ငလျှင်လှုပ်ရင် အဆောက်အဦး ပြိုပြီး ပိတတ်ရုံတင်မက မြေမြိုခံရတတ်တယ်ဆိုတာ
တွေလိုက်ရတယ် တကယ်ဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုရှောင်ရမှန်းမသိ
ဟုတ်ကဲ့ ဓါက်တူနံတူ သဘောင်္သီးမှန်မှန်စားပါ့မယ်။
နာဂစ် ဖြစ်တုန်းက သူများတွေ အဲဒီနေ့ ထမင်းငတ်ကြတယ်။
အိမ်မှာ ဆန်လည်း အဆင်သင့် ရှိတယ်.. မီးပျက်သွားတော့ ရေခဲသေတ္တာ အသုံးမကျတော့ ဘူးဆိုတော့ အဆင်သင့် ၀ယ်ထားတဲ့ ပုဇွန်ထုတ်ကြီးတွေ ချက်ပြီး စားလိုက်တယ်။
သဘာဝ ဘေးဒဏ်ထဲမှာ ငလျင်ဆိုတာ ဖြစ်မယ် ဆိုတာ ကြိုမသိနိုင်ပေမဲ့.. ကံ မပါရင်တော့ လွတ်တယ်။
ဘိုကလေး ကနေ ရန်ကုန် ကို မိသားစုလိုက် ပြောင်းလာတာမှ ၁ပတ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ် နာဂစ်ဖြစ်လို့ အိမ်ဟောင်းတောင် ရေထဲ ပါသွားတယ်။ ဒီမှာ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။
တချို့များ ရန်ကုန်မှာနေတာ အလုပ်သမားတွေ စရိတ်ပေးရအောင် နယ်ဆင်းသွားတာ ပြန်ကို မလာနိုင်တော့တဲ့ လူလည်း ရှိတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ မြေငလျင် မလှုပ်နိုင်အောင် အုပ်ချုပ်သူတွေက ဖိနိပ်ထားပါတယ်။
သဂျီးကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ မြေစောင့်နတ် ရှိသေးတယ်လေ၊ သူမကြိုက်တာ မလုပ်နဲ့ပေါ့။ ဥပမာ – အသားစားကြူးတာမျိုး….
ဘာပဲပြောပြော အရေးကြုံလာရင် Space Ship ကိုလူတိုင်းစီနိုင်ရင်ကောင်းမယ်